ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူများကို ယာယီလက်ခံရ၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ကြိုဆိုရေးစင်တာ ပြ?? - Yangon Media Group
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူများကို ယာယီလက်ခံရ၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ကြိုဆိုရေးစင်တာ ပြ??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄
ရခိုင်ပြည် နယ်ပဋိပက္ခအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွား သူများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာချိန်တွင် ယာယီ နေထိုင်နိုင်မည့် အဆောက်အအုံများကို စတင်ပြုပြင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ တွင် တည်ဆောက်မည့် တောင်ပြိုလက်ဝဲကြိုဆိုရေးစင်တာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများ စိစစ်လက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်မည့်လဝက ဝန်ထမ်းများနေထိုင်မည့်အဆောက်အအုံ၊ ထမင်းစားဆောင်၊ရှင်းလင်း ဆောင်စသည်တို့ကိုလည်း ပြန်လည် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CITF မှသိရသည်။ တောင်ပြိုလက်ဝဲကြိုဆိုရေးစင်တာသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများကိုစိစစ်ပြီး မြန်မာပြည်အတွင်း ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရမည့်သူဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာများသို့ ပြန်လည်မပို့ဆောင်ရသေးခင်ယာ ယီနေထိုင်ခိုလှုံရမည့်နေရာဖြစ် ကြောင်း CITF အဖွဲ့ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဦးဇော်မင်းသိန်းက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်ကပြောသည်။
“ပြန်ဝင်လာမယ့်သူတွေကို ဒီနေရာမှာ ခဏလက်ခံမယ်ပေါ့။ လဝကကလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတာပေါ့။ အဲဒီ့လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေလုပ်ပြီးသွားလို့ လက်ခံလို့ရတဲ့သူတွေကို ယာယီနေရာအဖြစ်ထားမှာပါ။ ပြီးတော့မှ သူတို့တကယ်နေရမယ့်ရွာတွေကို ပြန်ပြီးပြန်လိုက်ပို့မှာပေါ့။ သူတို့နေရမယ့်နေရာတွေကိုမသွားခင် ဒီမှာ ယာယီနှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက်ခဏနေမှာပါ”ဟု ဦးဇော်မင်းသိန်းကပြောသည်။ တည်ဆောက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောက်လုပ် ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးကျော်ဝင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
တည်ဆောက်မည့် အဆောက်အအုံများမှာ ခြောက်ခန်းတွဲအ ဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းအယောက် ၂၅၀ ခန့်အထိနေထိုင်နိုင်ရေး စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ကြိုဆိုရေးစင်တာပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဒေသခံများနှင့် ပူးပေါင်းကာ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်က စတင်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းနှင့် နိုဝင်ဘာလအကုန်တွင် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
UPDJC အစည်းအဝေး နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး မှုဆိုင်ရာမူဘောင်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် အတည
လန်ဒန်မြို့ လယ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြော
တူရင်မြို့နှင့် ဂျူဗင်တပ်က မိမိ၏ နေအိမ်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုနူချီပြောဆို၊ ကယ်လ်ဒါရာနှင့် အလဲအထပ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် CSO များ ကူညီပေးရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တိုက်တွန်း
မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများအားလုံး အီလက်ထရွန်နစ်မှတ်ပုံတင်စနစ်သစ်ဖြင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင
ခြောက်နှစ် စာချုပ်ဖြင့် ရီးရဲလ်သို့ ဟာဇက် ရောက်ရန် နီးစပ်ဟု သတင်းထွက်